कहिल्यै प्रेममा नपर्ने यी ६ राशी तपाईको कुन ? – Aaj ko Sandesh
मुख्य पृष्ठ /News/कहिल्यै प्रेममा नपर्ने यी ६ राशी तपाईको कुन ?
प्रेमका मामलामा सबैको विचार अलग अलग हुन्छ । कतिपयलाई प्रेममा रहेर पार्टनरका साथ खुसियाली जीवन बिताउनु महत्वपुर्ण लाग्दछ । यिनिहरु सजिलै प्रेममा पर्दछन् । तर त्यहि केहि मानिसको नजरमा प्रेमको मतलव शुन्य झै हुन्छ । उनीहरु प्रेममा प्रश्न गर्ने, पार्टनरलाई हमेशा शंका गर्दछन् । यिनिहरु हतपत प्रेममा पर्दैनन् । परे पनि कहिल्यै पार्टनरलाई भरोसा गर्दैनन् । कुनकुन राशीका जातक प्रेममा पर्दैनन्, जान्नुहोस् ।
उत्साही र साहसी स्वभावका धनु राशीका जातकलाई प्रेममा पर्दा आफ्नो स्वतन्त्रता सकिने भय रहन्छन । उनीहरु नयाँनयाँ प्रयोग गर्न रुचाउँछन् तर चाडैँ त्यसबाट दिक्क मान्दछन् ।
तसर्थ यी राशीका ब्यक्तिसँग प्रेममा पर्नेहरुलाई पनि यस प्रकारको समस्या रहने गर्दछ । तर एक पटक प्रेममा परेका यस राशीका जातक सदैव बफदार रहने गर्दछन् ।
४. तुला राशी